Simba rekufambisa Shongwe, Kutaurirana Shongwe - Qiangli
Isu Tinopa Zvigadzirwa Zvepamusoro
Electric angle simbi tower tower Power tower mhando yesimbi mamiriro furemu iyo inochengeta imwe yakachengeteka daro pakati pevanotsigira makondakita, pasi waya uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutumira. Kubva pakuumbwa: general angle simbi shongwe, simbi pombi pole uye simbi chubhu yakatetepa base base tower. Iyo angle angle simbi inowanzo shandiswa mumunda, uye iyo simbi pombi pole uye simbi pombi yakatetepa base tower inowanzo shandiswa munharaunda yemuguta nekuti nzvimbo yepasi idiki pane ...
Electric angle simbi shongwe Magetsi kona yesimbi shongwe imhando yesimbi simbi iyo inogona kuchengeta imwe nhanho yakachengeteka pakati pevatsigiri vafambisi uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutumira. Mumakore achangopfuura, nekukurumidza kukura kwehupfumi hwenyika, iyo indasitiri yemagetsi yakawedzera nekukurumidza, izvo zvakasimudzira kukurumidza kusimudzira kwekutepfenyura mutsetse shongwe indasitiri. Maererano nehuwandu, iyo mari yekutengesa yekutapurirana mutsetse shongwe indasitiri muChina yakawedzera kubva pa5 bil ...
Electric angle simbi shongwe Magetsi kona yesimbi shongwe imhando yesimbi simbi iyo inogona kuchengeta imwe nhanho yakachengeteka pakati pevatsigiri vafambisi uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutumira. Muma1980s, nyika zhinji pasi rose dzakatanga kuisa mapaipi esimbi pombi kune iyo dhizaini painogadzira UHV mitsara yekufambisa. Simbi chubhu shongwe nemapombi esimbi sezvo chinhu chikuru chakaonekwa. MuJapan, simbi chubhu shongwe dzinenge dzinoshandiswa mune 1000kV UHV mitsara uye shongwe. Ivo ...
Qingdao Qiangli Steel Structure Co. Ltd, yakawanikwa muna 1998, iri kuita mhando dzose simbi mamiriro ouinjiniya design, gadzira, uye kugadzwa, izvo zvinopa imwe-vanorega basa vatengi sezvo pamwero mukuru nyanzvi zvebhizimisi. Tiri vanokwanisa sezvo Qingdao High Technology Enterprise uye Mutevedzeri President Enterprise pamusoro Jiaozhou Steel Structure Association.
Kumaruwa kwakashatiswa dzimba kutamiswa ndeimwe yemapurojekiti ekutsvagisa simbi mamiriro ekugara
Kuvaka simbi mamiriro ekugara ndiyo yekumaruwa seismic kuita, ipfupi yekuvaka nguva, yakakwira maindasitiri, kuchengetedza simba, inogadziriswazve, nezvimwe, zvinoenderana nenyika yenyika yekusimudzira pfungwa uye kuvaka kwesosi-inoponesa nzanga nhungamiro nhungamiro. “Rapi Rural ...
Ndira 13, "Hebei Provincial People's Government pamusoro pekuitwa kwekuvandudzwa kwenzvimbo dzemusangano-maitiro pakuitwa kwemaonero e" kuburitswa kwepamutemo, kusimudzira zvine simba kushandiswa kwegungano reHebei nekusimudzira. Zhuo Da Boka pamwechete ...
Chongqing Simbi Sisitimu Viwanda Co., Ltd. yakagara mudunhu redu
Vatori venhau nezuro kubva kuJiangbei mukanwa manejimendi manejimendi vakaudzwa kuti Chongqing Steel Industry Co, Ltd. ichangogara muJiangbei muromo wezvemari muguta Nha. Chongqing Steel Structure Maindasitiri Co, Ltd. yaive ime ...
Bengbu Olimpiki Sports Center main stadium simbi kuvaka kweiyo yekutanga crane kupedzisa kuvaka
Sekureva kweBangbu News yakashuma kuti mangwanani eFebruary 28, Bengbu Olimpiki Sports Center main nhandare nzvimbo, yakareba 45 metres, inorema matani makumi matanhatu esimbi yekumisa zambuko yanga ichisimudza zvishoma nezvishoma iyo crane, uye yakazomiswa kupfuura 20 metres High stand. pamusoro pembiru yesimbi, ...
Provincial Gymnasium yakavaka muviri mukuru wenhandare uye nesimbi mamiriro
Lanzhou Morning News (Mutori wenhau Lu Weishan) Vatori venhau musi wa Kukadzi 23 wakaitirwa mumusangano webasa remitambo yemudunhu vakaziviswa kuti gore rakapera dunhu iri mukusimba kwehutano hwenyika raita budiriro huru, dunhu rakaita nhangemutange makumi matanhatu neshanu, yakawedzera nhandare Yemahara kuvhura kuedza ...
Magetsi Angle Simbi Shongwe, Kanzuru yeKutaurirana kweMasipare, Angle Simbi Simba Rinofambisa Shongwe, Magetsi Angle Simbi Towers, Prefab Simbi Zvivakwa, Tube Simbi Sisitimu,